200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105 300-101 300-206 300-070 70-417 210-260 210-060 200-355 300-208 CISSP 300-135 210-065 300-209 70-243 70-480 CCA-500 2V0-621D 210-451 400-051 E05-001 1Z0-052 70-410 640-916 VMCE_V9 810-403 070-464 070-243 700-802 70-246 FCBA GPHR DEV-401 C2090-610 SY0-401 712-50 ADM-201 700-039 312-50 MA0-101 648-244 SK0-004 ASF 70-494 70-673 500-005 1Z0-060 C9560-503 640-875 N10-006 98-367 70-534 NS0-505 70-342 CHFP 070-410 640-878 1V0-603 1Z0-804 C8010-250 312-50V9 C2150-508 98-368 CLOUDF 70-411 70-461 220-901 70-488 070-341 PK0-003 E20-547 70-412 70-686 500-285 CISM 101-400 102-400 PDM_2002001060 JN0-100 642-883 CAP 070-347 DAAWO: Hogaamiyaha Jubbaland oo Kismaayo isugu keenaya Dowlada dhexe & Maamul goboleedyada & Go’aankiisa Khilaafka Carabta | Shabakada Warbaahinta Times
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa magaalada Kismaayo uga dhawaaqay inuu gogol ufidinayo dowlada dhexe iyo maamul goboleedyada isku khilaafay Arinta Carabta.
Madaxweynahu wuxuu sheegay in gogoshan Madaxda Dowladaha xubnaha ka ah Dowlada dhexe, ay kaga wada hadlayaan sidii loo dhamayn lahaa muranka taagan isla markana go’aan midaysan oo ay ku dhan yihiin Dowlad Goboleedyadu ay ula tagi lahayeen Dowlada Federaalka ah.
Waxaa uu sheegay in lagama maar maan ay tahay in talada guud looga danbeeyo Dowlada dhexe balse taas badalkeeda looga baahan yahay Dowlada Federaalka ah in waxyaabaha masiiriga ah ay la tashi ka samayso isla markaana ay ixtiraam u muujiso Dowlad Goboleedyada.
HOOS KA DAAWO KHUDBADDA OO FULL AH
Mar uu ka hadlayay khilaafka Wadamada Khaliijka ayuu Axmed Madoobe sheegay in ay yihiin dad walaalo ah oo barri heshiinaya balse loo baahan yahay in wixii iyaga ka dhexeeya aan lagu kala qaybsamin oo aragti loo dhan yahay lagu eego marka soomaaliya laga hadlayo.
Sidoo kale, waxaa uu ka hadlay in Baraha Xiriirka Bulshada ay wax badan oo siyaasada dalka ah ay uga sii darayaan isagoo Bulshada ku booriyay in la isku tanaasulo oo midnimada laga shaqeeyo.
Hadalka kasoo yeeray Madaxweynaha Jubbaland ayaa kusoo aadaya xili maamulada Puntland, Koofur Galbeed iyo Galmudug ay xariirka ujareen Qatar, halka dowlada dhexe ay ku adkeysatay go’aankeedii dhex-dhexaadnimada ahaa.